आफ्नो माटो छोएको दिन
२०७४ जेठ ६ शनिबार १०:०१:००
मन आखिर मन न हो, खुसी हुँदा हाँस्छ र दुःखी हुँदा रुन्छ । निःसृतिले बाटो पाउँदा आँसु त्यसैत्यसै छचल्किन्छ । त्यो खुसीको आँसु, त्यो दुःखको आँसु । आँसु र मानव जीवनको सम्बन्ध ज्यादै पुरानो रहेछ । त्यसैले खुसी हुँदा पनि आँसु बरर र दुःखी हुँदा पनि आँसु बरर । हो, मेरा आँखाबाट पनि आँसु झर्छन् । तर, अफशोच ! म मेरा आँसुको सार्वजनिकीकरण गर्न सक्दिनँ ।
मलाई याद छ– आजभन्दा करिब १८–१९ वर्षअघि म ओशो तपोवनमा केही महिनाका लागि गएको थिएँ । त्यो बसाइँमा मैले ओशो, प्रेम र आँसुलाई आत्मसात् गरेँ । म ओशोको ‘मैं मृत्यु सिखाता हुँ’ पढ्दा यति रोएँ, त्यसको लेखाजोखा मसँग छैन । ‘मैं मृत्यु सिखाता हुँ’का प्रत्येक लाइन पढ्दै जाँदा मनमा एक भिन्दै प्रकारको अनुभूति हुन्छ । एकदमै निजात्मक हुन्छ त्यो अनुभूति । त्यो अनुभूति म अर्थात् स्वयंसँग मात्रै हुन्छ । साधारणीकृत रुनुसँग मेरो यो आलेखको कुनै सम्बन्ध छैन । यानेकि भौतिकताको अप्राप्तिसँगै जन्मिएका दुःखका अवसादहरूको पोको बोकेका मानवीय जीवनहरू साक्षीभावको अभावमा रुन्छन् । आफ्नो कथा रोदनसँग साट्छन् । यो पाटोसँग मेरो लेखको कुनै तादात्म्य छैन ।
म टीएस इलियटका लाइनहरू पढ्दा पनि रुने गरेको छु । Ode to the West wind र ode to an Grecean Urn जतिपटक पढ्छु, त्यत्तिकै रुन्छु । ‘गौरी’ पढ्दा म कमनीय बन्छु । ‘मुनामदन’ पढ्दा मेरा आँसु त्यसै–त्यसै छचल्किन्छन् । हो, Macbeta को Lady walking Seen पढ्दा पनि मेरा आँखाबाट आँसु झर्दैछन् । Lucy Gray का पाइला पहाडीमा हराउँदा म व्याकुल भएर Lucy लाई खोजिरहेको हुन्छु अनि । कालिदासको ‘अभिज्ञान शाकुन्तला’ पढ्दा म थामिनसकिने गरी रोएको छु । आखिर किन रुन्छु म ? यसको उत्तर मसँगै छैन तर कुनै पनि साहित्य, कला, चित्रकला वा मूर्तिकलाले मलाई छुनेबित्तिकै मेरा आँखा त्यसै–त्यसै छचल्किन्छन् ।
हिजोबाट फेरि मैले ‘मैं मृत्यु सिखाता हुँ’ पढिरहेको छु । ओशोका ठूला–ठूला दुई विस्फारित नेत्रहरूले मलाई घुरी–घुरी हेरिरहेका छन् । यो अनुभूतिले मलाई झन् द्रवित बनाइरहेको छ । मैले प्रत्येक हरफहरूमा मृत्युबोध गर्दैछु । मृत्युबोधसँगै बाँचिरहेको यथार्थ आँखाअगाडि आउँछ । कोही पनि ओशोबाहेक या समृद्ध ठाउँबाहेक कसैले मृत्युलाई यति सहज र यति शालीन पाराले वरण गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जीवनको अन्तिम लक्ष्य हो मृत्यु । तर हामी यो चिरन्तन र शाश्वत मान्यताबाट सधैं भ्रमित भएर भागिरहेका छौं । बाँच्नु एउटा शाश्वत सत्य । मृत्यु त्यस्तै अर्काे शाश्वत सत्य । यही बीचको समयचक्र जीवन, घडीको पेन्डुलम ।
करिब–करिब तीन वर्षको अन्तरालमा म आफ्नो पैतृक स्थल, आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो भावभूमि दाङ बनहरी पुगेँ, छोरालाई साथ लिएर । गाउँको केही तल पुग्दै गर्दा मेरो भावोत्तेजना बढ्यो । म रोएँ । छोराले बुझ्नै सकेन ।
छोराले अन्यमनस्क भावमा विस्फारित नेत्रले मलाई टुलुटुलु हेरिरह्यो । मलाई सोधिरह्यो,
“बाबा के भयो ? किन रुनुहुन्छ ?”
मेरो न वाक्य फुट्यो, न रुवाइ कम भयो ।
बसबाट ओर्लिनासाथ देखिने ठूलो पीपलको रुख जहाँको तहीँ थियो । डन्डिराम दाइको रातो माटोले लिपेको सफा आँगन, लहरै फुलेका घरैघर । मेरो मनले मान्दै मानेन । एउटा घरमा छिरेर सोध्ने प्रयत्न गरें, “यो कसको घर हो ?”
उत्तर आयो, “फलानो भुसालको ।”
“कहाँका भुसाल ? बनहरी, मोहनपुर, खाद्रे, माझाडाँडा, कालाखोला, घुसेरी, बम्नै वा पर्सेनी कहाँका ?”
“हैन, प्युठानबाट आएको हामी,” एउटी महिलाले प्रत्युत्तर दिइन् ।
“तपाईं कहाँबाट आउनुभएको ?”
“आ’को त काठमाडौंबाट हो, तर मेरो घर यहीँ हो ।”
“बनहरी,” मैले उत्तर दिएँ ।
ओहो, ‘बनहरी’ शब्द किन यति प्यारो लाग्दैछ मलाई ? मेरो छोरालाई के थाहा ‘बनहरी’ शब्द बोल्दै गर्दा मेरो छातीको धड्कन किन उत्ताउलो हुन्छ !
उनले सोधिन्, “काँ नेर ?”
“दुईटा घर सँगै छन् नि ! दुई ठूला घर । बाटाको पूर्वतिर । कुलाको ढिकैमा । हो, त्यही हो मेरो घर ।”
म गर्वले फुलेँ, रैथाने नाक ठड्याएर र एकहदसम्म सोचेँ– नेपाली डिस्कोर्समा पहिचानको खोज ।
साँच्चिकै कुनै ठाउँको रैथाने हुनुको मज्जै अर्कै छ । त्यो मेरो छोरालाई के थाहा !
भंैसेपाटी ललितपुरमा हुर्किएको ऊ । उसको हुर्काइको संसार ७ आनामा बनेको हत्केलाजत्रो घरबारी र मेरो हुर्काइ ३ बिगाहामा फैलिएको अनि बगैंचाले घेरिएको छातीजत्रो घरबारी । मेरा परिचितहरू काका, दाइ, फुपू, कान्छाबा, हजुरबा, हजुरआमा, रामलाल दाइ र पानकुमारी । उसका परिचितहरू आफ्ना स्कुले सहपाठी र टोलका १–२ जना भुराभुरी ।
म डाँडामा फुटबल खेल्थें । मैले पहिलोचोटि मोजाभित्र टाला लपेटेर गेंदा बनाएको घरको आँगनतिर जाँदैछु म । मेरो छोराले कसरी महसुस गरोस्, त्यो गेंदा बनाउँदा मैले संसार जितेको थिएँ !
म त्यसै कहाँ रोएको हुँ र छोरा ! यस्ता अनेकौं अव्यक्त अनुभूतिहरू छन् यो गाउँसँग, जसले नरोऊँ भन्दाभन्दै पनि मलाई रुवाउँछन् । बिर्सूं भन्दाभन्दै पनि मलाई सम्झाउँछन् ।
हो, म केहीबेर लाजै नमानेर रोएँ । र, केही बेरपछि अलि सहज बनें । छोराले बुझ्यो, म त नोस्टाल्जिक भएछु ।
बम्नै कट्न लाग्दालाग्दै मलाई आभास भयो, साँच्चिकै बम्नै त स–सानो बजारै भइसकेछ– प्लास्टिक र चिसो संस्कृतितिर अग्रसर । अटोमा चढेर यताउता हिँड्न सकिने । गाउँको पुरानो रूप कहाँ छ र अब ! कुनै बेला बिहान तुलसीपुर हिँडेका हामी ४ घण्टा लगाएर साँझ फर्किन्थ्यौं ।
त्यही बेला झल्याँस्स भएँ– खोइ त भुँडे पोषणराज बाजे र योगेश्वर काकाका त्यत्रा ठूला–ठूला घर ? बिजौरीबाटै टक्टकी देखिने सेता घर ? कतै नामोनिसान छैन । त्यति ठूलो बगैंचा र फूलबारी खै ? डन्डिराम दाइकी आमाको (निरक्षर भएर पनि) शालीन, भद्र, मृदु, ममतामयी अनुहार मेरा आँखाअगाडि आयो । सजल नेत्रले मैले उहाँलाई खोजिरहेँ । उहाँको वैकुण्ठबास भइसकेको कुरा मलाई हेक्का नै रहेन । मैले त तिनै महिलालाई खोजिरहेँ, जसले म मीनपचासको जाडो काट्न स्कुलको छुट्टीमा घर जाँदा उहाँको कान्छो छोरा (मेरो बालसखा)सँगै बुट्टे काँसको ग्लासभरि चिया अनि फिनी रोटीको थाल राखिदिएर भन्नुहुन्थ्यो, “खाऊ, जनै हाले पनि केही हुन्न ।”
म तृप्त हुन्जेल धित मर्ने गरी खान्थें । उहाँको मातृवात्सल्य छताछुल्ल हुन्थ्यो । म प्रफुल्लित र रोमाञ्चित हुन्थें । बाटैमा थियो त्यो घर । त्यसैले सुटुक्क बाटातिर हेर्थें, कतै मैले खाएको कसैले देख्न त देखेनन् ? र, बाटामा कसैलाई नदेखेपछि ढुक्क हुन्थेँ– मेरो जात गएको कसैले देखेको छैन ।
प्रत्येक मीनपचासको छुट्टीमा म त्यो घर नछिरी छोड्दिनथेँ । मेरो जातभन्दा मलाई उहाँको माया मीठो लाग्थ्यो । म झल्याँस्स वर्तमानमा आएँ । ओहो ! म त विगत, त्यो पनि ३० वर्षअगाडिलाई आगतमा थापिरहेको छु र साथमा छोरो पनि छ ।
त्यो ठाउँमा अहिले पनि एउटा घर खडा छ । तर, डन्डिराम दाइको त्यो घर छैन । न सदाबहार फूल, न त मायाकी खानी उहाँकी आमा । मसँग खाली त्यो सम्झनामात्र छ । पुनः एकपटक मैले त्यो विगतसँग आफूलाई समीकृत गरेर आत्मसात् गरें । यथार्थ मेराअगाडि उभिएको थियो ।
“कसलाई खोज्नु भा’को ?” म झल्यास्स भएँ । छोराले सोध्दैछ मलाई ।
“केही होइन, त्यसै ।”
जीवन सम्झनाहरूको साझा कोलाज त रहेछ । जिन्दगी बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्छन् तर मैले थाहा पाएँ– यो त फगत् एउटा सम्झौटो रहेछ । यो थाहा पाउन अरस्तु या बुद्ध बन्नु पर्दै पर्दैन रहेछ ।
मैले आफूलाई अलि सहज बनाएर आँसु पुछेँ । एउटा लामो निश्वास फेरेँ ।
बाटोका दुबैतिर लटरम्मै चना फल्ने खेतहरू थिए । अहिले तिनको नामोनिसान छैन । योगेश्वर काकाको छोराले पनि मैले पढेकै स्कुलमा पढेको । त्यसैले त्यहाँ जाँदा उहाँहरूको परिवारले राम्रो गथ्र्याे । त्यहाँ लिच्ची चोरेर खाएको घटना सम्भिmएँ । उहाँको छोरा मभन्दा तल्लो कक्षामा । म दाजु । उसले भन्थ्यो, “दाइ, लुकेर जाम् । अहिले बुढीले देखे कराउँछिन् ।”
उसले हजुरआमालाई ‘बुढी’ भन्थ्यो । लिचीहरू योगेश्वर काकाकहाँ मात्र थिए र राँगो पनि उहाँकै घरमा मात्र । भँैसीले राँगो खोजेका बेला मतउ (मतवा) थारू (कमैया)का साथ लागेर भैँसीलाई बाली लगाउन त्यो ठाउँमा गएको सम्झना आँखाभरि नाचिरह्यो ।
बम्नैमा अहिले आधुनिक मिल रहेछ । तेल पेलाउन अनि पिसानी र कुटानी गर्न उहिले जितपुरमा ऋषिराज काकाको मिल थियो । बम्नैको आधुनिक मिल चलिरहेको थियो । झ्वाट्ट सम्झना आयो, छोरालाई देखाइदिन्छु– खली (पिना), ढुटो र कोदो के हो, तेल कसरी बन्छ । आफ्नो बाल्यकाल सम्झिँदै छोरालाई तोरीबाट तेल र खली निक्लिएको देखाएँ । ऊ रोमाञ्चित भयो । भयो र भन्यो, “बाबा अलिकति लगेर जाम्, नुहाउनु पर्ला ।” उसलाई थाहा छैन, खलीले कसरी नुहाउने !
मेरा दृष्टिविम्बहरूले अतीतको पदचापलाई पछ्याउन खोजे । भोजपाख्या बड्डी (बूढी)को बगैंचा थियो, यहाँनेर । तर, त्यो ठाउँमा ठूलो घर बनिसकेको रहेछ । तिनको बगैंचाका लिची र आँप ढुंगाले हानेर झार्दै खाएको त्यो बालपनका म, यज्ञ, ध्रुवे, हिमालय, विवेक, समर्थन र सधैं पछिपछि लाग्ने मनु काका । हामी बूढीको गालीको नक्कल उतार्दै दगुथ्र्यौं । यज्ञ अब यो संसारमा रहेन । हिमालयलाई भेट्दा आफैंलाई बूढो भएको अनुभूति भयो । अगाडिका दाँत झरेर होला– हिमालय उमेरभन्दा बूढो देखियो । त्यसो त उमेरले ऊ मेरो दाजु हो ।
अलि अगाडि बढेँ । पीताम्बर केसीले धुसरीबाट छुट्टिएर बाटैमा घर बनाएका छन् । भाउजूले टाढैबाट चिन्नुभो । बाटोसम्म आएर कुशलमंगल सोध्नुभो । कुशलमंगलमात्रै होइन, पूरै इतिहास सोध्नुभो । मसँगै उभिएको मेरो (जेरोक्स) फोटोकपीलाई इंगित गर्दै ‘यत्रो बनाल्नु भएच छोरालाई’ भन्नुभो । बाबु गजक्क प¥यो, खिस्स हाँस्यो । “काटीकुटी बाजेको जस्तै अनुहार रहेछ नातिको,” बस्नेत दाइले थप्नुभो ।
हाम्रो खोलो आयो । हातमुख धोएर त्यै पानी तनक्क धीत मर्ने गरी पिएँ । बाबु चकित भयो, भन्यो, “यस्तो खल्लो पानी ! कस्तो फोहोर होला– छिः बाबा नखानुस् ।”
मैले बाल मतलब नगरेर पानी दन्काएँ । अनौठो आनन्दको सञ्चार भयो अंग अंगमा । शायद मनले थाहा पायो होला– पुरानो पानीको स्वाद ।
म त्यै पानी खाएर हुर्किएको बनहरे हुँ । मेरो सिंगो परिचयको परिचायक हो बेतन्ने खोला, जसमा खेल्दै, पौडिँदै, माछा मार्दै र खेतमा पानी लाउन मतउसँग हिँड्दै मैले आफ्नो बालापन बिताएको हुँ । स्मृतिहरू आँखाभरि अटेसमटेस हुन आए ।
खोलासँगै रहेको हाम्रो ठूलो खेत लमतन्न सुतेको थियो । मानौं, मसँग रिसाएको छ र केही भन्न खोजिरहेको छ । मानौं उसले भन्दैछ, “तेरो बाउको पालामा त म शस्य श्यामला हुन्थेँ, हेर् त मेरो अवस्था । विधवाको सिउँदोजस्तो उजाडिएको छु म ।”
खेतले मलाई भित्रैसम्म हल्लायो, तर्सायो र छट्पट बनायो । यसरी भोको पेट भर्ने खेत खाली बगरमा परिणत भएको मेरो मात्र हैन, गाउँ छोडेर सहर पसेका सबैको यस्तै छ । त्यत्रो उत्पादन क्षय भयो । मैले बजारमा पोलिथिनको झोलामा किनेर खान्छु । म गाउँमा हुँदा छिटुवा (बाँसको सामान राख्ने भाँडो)का छिटुवा आलु, प्याज, लसुन चाकी राख्ने कोठाभरि छरिएका हुन्थे । आमाको हस्याङफस्याङ उस्तै हुन्थ्यो । इष्टमित्रलाई तरकारी बाँड्न उहाँलाई भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो ।
आमाको त्यो हँसिलो र दिव्य अनुहार मेरो आँखाअगाडि सजीव भयो । झल्याँस्स भएँ । कतै पढाइ–लेखाइ र जागिरका क्रममा मैले मेरै माटोप्रति अन्याय त गरिनँ ? मनमा अर्काे भावना पलायो । म गाउँमै बसिरहेको भए त्यहीँको सामन्त पनि त हुन सक्थें । आखिर मेरो हुर्काइ त्यस्तै वातावरणमा त भयो । तर अर्को मनले भन्यो– हैन–हैन, म कदापि त्यस्तो हुन्नथेँ । म अरूका लागि जिउज्यानै फाल्ने मान्छे, कसरी त्यस्तो बन्न सक्थें ?
मन हलुका भयो । त्यतिबेरसम्म घरभित्रबाट भक्ति दाइकी दुलही, बस्नेतनी दिदी आए । बस्नेतनी दिदीलाई देख्नेबित्तिकै सोधिहालेँ, “सम्पत्ति खाने कोही धर्म छोराछोरी बनाउनुभयो कि नाइ ?”
मलीन अनुहारले भन्नुभयो, “छैन बाबु ।”
यी शालीन दम्पत्ती निरक्षर भएर पनि आदर्श थिए । गाउँमा सरकारको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ बस्नेतनी दिदी । यस्ती आमाको कोखमा कुनै सन्तानले बास नपाउनु प्रकृतिकै विभेद हो ।
लौरो टेक्दै गाउँका महतवा खुसीराम बाबा आए । मैले नमस्कार बाबा भनेँ । बूढा खुसी भए । गाउँभरिका थारूहरूका नाइके हुन् उनी । वंशाणुक्रमले पाएको भूमिका । तर, अब उनलाई संकट रहेछ । छोराको जँड्याहा बानी । आफ्नो छोरालाई इंगित गर्दै भने, “का जानम्, कैसिन करथा ।”
उनका आँखामा भविष्यको चिन्ता टड्कारो देख्न पाइन्थ्यो । त्यतिबेर मलाई पहिले नै देखेर भित्र गएर चिया पकाइवरि ठीकठाक पारेकी मौजी आइन् । म हरेक माघीमा त्यहाँ गएर जाँड, ढिक्री र सुँगुरको मासु खान्थँे । मौजीले ‘नखाऊ सुँगुरको मासु, अरू खाऊ’ भन्थिन् । म झन्झन् त्यै खान्थेँ । एक–दुई रात मैले त्यो घरमा बिताएको छु । महतवाकी कान्छी छोरीलाई मेरो वयस्क हुँदै गइरहेको मनले खोज्यो, कतै पाइनँ । सोधें, “भ्वाज कहाँ होइल बा ? (बिहे काँ भा छ ?)”
लामो जमिन छुने कपाल । बठिन्या (तरुनी) हुँदा कम्ती राम्री थिई ! कोही थारूले आँखा लाउन नसक्ने महतवाकी छोरी । मैले साइड हान्थेँ । मेरो मनमा महिलाप्रतिको आकर्षणको पहिलो केन्द्रबिन्दु उही नै हो । लौ जे पर्ला, मैले कुरा खोलें । मन त आखिर मन न हो । यसलाई माया चाहिन्छ । म विगतमा पुगें ।
थारू गाउँभरि घरैघर भएछन् । सबै छुट्टिए होलान् । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । गाउँ पुग्दा नै पहिलो आभास भयो प्रभासलाई– गाउँ युवा÷युवतीविहीन भइसकेछ । श्रम गर्ने पाखुराबिनाको उजाड धर्ती बोकेर सुन फल्ने बेतन्ने, रानीघाट, खोस्ची काखा बाँझै रहेछन् ।
ढाका–टोपी लाएका शम्भु दाइ हाँस्दै उभिनुभा’थ्यो । मैले ठम्याउन सकेको थिइनँ । दाइले परैबाट ठम्याइसक्नु भा’रैछ । उही हाँसो । बिन्दास शम्भु दाइ । उहाँले र मैले यौवन सँगै बिताएका छौं । एक–अर्काप्रति आत्मीयता छ । छुट्टीमा घर गएका बेला र उहाँ भारतबाट नेपाल आएका बेला हामी एक–अर्कालाई भेट्न घरमा पहिले नै पुग्थ्यौं । अरूभन्दा उमेरले दाइ, मभन्दा ७–८ वर्ष जेठो हुनुहुन्थ्यो ।
बाबुको शिरमा आशीर्वादको हात राख्दै सबै गाउँलेले ‘बाबाले जस्तै धेरै पढ्नू’ भने । खुसी लाग्यो । ए मेरो परिचय यस्तो रहेछ गाउँमा भन्ने अनुभूति भयो । वयस्कतातिर लम्किँदै गरेको छोराले पहिलो पटक आफ्नो माटोसँग तन्मयतासाथ खेल्ने अवसर पायो । आजभोलिका केटाकेटीले ढोग्नु, आदर गर्नु, बोल्नु त जान्दै जानेका हुन्नन् भन्ने लाग्थ्यो तर छोराले ठूला–साना, पढे–नपढेका, गाउँले, सहरियाबीचको अन्तर भुलेर आत्मीय गाउँले बन्न सकिरहेको देख्दा गर्व लाग्यो ।
जति–जति घरनजिक गइपुगँे, त्यति–त्यति मन ढकढक गर्दै गयो । भँयेँर देवतालाई थारू गाउँनेर नै आफ्नो आस्था प्रकट गरिसकेको थिएँ । छोराले हलो गाडेको (भँयेँर देवता जोत्ने हलो काठको आकृतिबाट निर्मित गरिएको) देख्न त पहिले पनि देखेको थियो होला तर पहिलोपटक अनुभूत ग¥यो, स्वीका¥यो, नतमस्तक भयो ।
घरैनेर पुग्दा मन खंग्रंग भयो । किन खलियानको आँप काट्न लगाएँ हुँला ? कस्तो उजाड–उजाड लाग्यो । गोठ भत्किएकोले त्यसका ढुंगा यत्रतत्र फैलिएका, झन् दिक्क लाग्यो । आँखामा आँसु रसायो । मलाई भित्रसम्म हल्लायो । आँखा चिम्म गरें । सिधै कुलदेवता पूजा गर्ने ठाउँमा छोरालाई लिएर गएँ । साइँला बाका छोराहरूले भर्खरै गरेको पूजाको अवशेष बनाइरहेको मन्दिर, त्यसको वर यथावत् थियो । आँखा चिम्म गरें । इसारा गर्दै छोरालाई मेरो अनुसरण गर्न लगाएँ । छालाको सामान बाहिर फालेँ । आमाले सानैमा सिकाएका संस्कृतका श्लोक र मन्त्रहरू त्यसै–त्यसै बौरिएर आए । म गाउँदै गएँ । प्रदक्षिणा गर्दै गएँ । म रुँदै गएँ । यो आँसुको सम्बन्ध त अन्तस्करणसँगै हुँदो रहेछ । जब भित्र छोइन्छ, तब–तब म रुन्छु । आँसु र मेरो सम्बन्धमा तादाम्य छ । छोरा पनि भावविह्वल भयो । एकाध श्लोक र मन्त्रका आधा पदसम्म उसलाई पनि आउँदा रहेछन् । मसँगै उच्चारण ग¥यो ।
पूजा गर्ने कोठाको ढोका खोलेँ । भित्र सफा थियो । लिपपोत गरेको भित्तामा कुलदेवताका ध्वजा हल्लिरहेका थिए । सरर्र चिसो बतास आयो र पुनः ध्वजा हल्लिए । म खुसीले ओतप्रोत भएँ । कुलदेवीको निगाह मप्रति रहेछ भन्ने ठूलो आभास भयो र ढाडस पलायो ।
छोडेर हिँडेको घर कहाँ मैले खोजेको जस्तो हुन्छ र ? अनि बस्ने मान्छे हुँदैमा पनि त घर घरजस्तो बन्दैन । घर बन्नलाई भावना चाहिन्छ । एउटा आत्मिक, आध्यात्मिक अनुभूति । पहिलोपल्ट आभास भयो, मैले मेरो रिटायर्ड जीवन यहीँ बिताउनु पर्छ । मेरा बाबाले बसाएको घर । मेरी आमाको संसार । मैले मेरा सन्ततिलाई त्यसैरूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
मेरो उत्तर कोठा, जहाँ म र मेरो संसारको रचना भयो– मानसपटलमा दगु¥यो । कहाँ निद्रा लाग्ने ? रञ्जु (श्रीमती) लाई फकाएर, धम्क्याएर, थर्काएर र मनाएर झ्यालबाट फाल हाल्दै साथीहरूसँग नाच हेर्न गएको ! बजारबाट सोमरस पिएर आएको बेला नकचरो हुँदै त्यै झ्यालबाट माथि चढेको । सबै–सबै रातभरि नै याद आइरह्यो । मेरा आँखा रसाइरहे । अनि प्रण गरेँ– बुढेसकालमा बूढीसँगै बाँकी जीवन यहीँ बिताउँछु । मन फेरि आशावान् भयो ।
श्रीमती बुहारी बनेर आएपछि उसले गरेका सिर्जना आँखाभरि नाचे । आमालाई पछ्याउँदै ऊ यताउती गर्थी । म लुकेर हेर्थँे । खिस्स हाँस्थी । अहिले विचार गरेँ, रञ्जुका सेता दाँत हाँस्दा अति नै सुहाउँछन् । बुढेसकालमा ऊ थोते भएर कसरी हाँस्छे होला ? अनुमान गर्न मन लाग्यो । त्यै बेला चराको चिरबिर, कुदाकुद सुरु भइहाल्यो । मैले ननिदाएरै त्यो रात काटें ।
सम्बन्धको प्रसारण रहेछ आँसु, आत्मीयताको प्रक्षेपण रहेछ आँसु अनि अनुभूतिको उच्छ्वास रहेछ आँसु । त्यसैले खुसी हुँदा पनि आँसु र दुःखी हुँदा पनि आँसु ।
(लेखक ग्रामीण समाजशास्त्री र मानवशास्त्री हुन्) ।
भीडबाट अलग पाण्डे र ‘सल्लीपिर’